सवारी दुर्घटनामा कमी- कर्णाली - कान्तिपुर समाचार
सवारी दुर्घटनामा कमी
रुकुम पश्चिम — जिल्लामा सवारी दुर्घटनामा कमी आएको छ । आव ०७४/७५ को तुलनामा गत आव ०७५/७६ मा कम सवारी दुर्घटना भएको हो । जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका अनुसार दुई आवको अवधिमा तुलनात्मक रुपमा पछिल्लो आवमा सवारी साधन दुर्घटनामा कमी भएको हो ।
नियम मिचेर चल्ने सवारीको संख्या पनि घटेको छ भने त्यसकै कारण दुर्घटना कम भएको प्रहरीले जनाएको छ । आव ०७५/७६ मा कारबाहीमा पर्ने सवारीसाधन र राजस्वमा पनि कमी आएको ट्राफिक प्रहरीको भनाइ छ । गत आवमा जिल्लामा १२ दुर्घटना भएकामा ८ जनाको मृत्यु भएको थियो । ३० जना घाइते भएका छन् ।
आव ०७४/७५ मा २८ दुर्घटना हुँदा २० जनाको मृत्यु भएको थियो भने ७८ घाइते भएका थिए । सडकको स्तर सुधार हुनु, ट्राफिक चेतनामा वृद्धि हुनु, ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्नेलाई कारबाही हुनुलगायत कारण दुर्घटनामा कमी आएको जिल्ला ट्राफिक इन्चार्ज (प्रहरी नायब निरीक्षक) गंगाराम विकले बताए ।
शून्य सहनशीलता अपनाएर नियम मिच्ने जो कोहीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइएको उनको भनाइ छ । ‘सानो गल्तीले ठूलो दुर्घटना हुन सक्छ,’ विकले भने, ‘त्यसैले सानो गल्ती गर्दा पनि नियमानुसार कारबाही गरिएपछि दुर्घटनामा कमी आयो ।’ गत आवमा राजस्वमा पनि कमी आएको उनले जानकारी दिए । गत वर्ष ट्राफिक कारबाहीबाट २६ लाख ३ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ ।
जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले ४ हजार ८ सय ८८ सवारी साधन कारबाहीबाट २६ लाख ३ हजार राजस्व संकलन गरेको जनाएको छ । गत आवमा सबैभन्दा बढी मोटरसाइकल कारबाहीमा परेका छन् भने राजस्व पनि बढी संकलन भएको छ ।
१८ सय ३४ मोटरसाइकल कारबाहीबाट १० लाख ६६ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको विकले जानकारी दिए । उनका अनुसार ट्राफिक नियमविपरित चल्ने ८ सय ९८ बस, ५ सय ८६ जिप, ४ सय ११ ट्रक, ९८ ट्र्याक्टर र ६१ अटो कारबाहीमा परेका हुन् ।
प्रकाशित : भाद्र ३१, २०७६ ०९:३६
बढ्दै डेंगुको जोखिम
सल्यान — जिल्लामा डेंगुको जोखिम बढ्दै गएको छ । भेरी नदी किनारको सल्लीबजार सबैभन्दा बढी जोखिममा छ । स्वास्थ्य कार्यालयका अनुसार शारदा नदी किनारका बस्तीहरू श्रीनगर, कालीमाटी, लुहामलगायत डेंगु संक्रमणको जोखिममा परेका हुन् ।
छिमेकी जिल्लामा डेंगुका बिरामी बढ्न थालेपछि र आउजाउ बढ्दै गएपछि संक्रमणको जोखिम बढेको हो । जोखिम बढ्दै गएकाले उच्च सतर्कता अपनाउन चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीले आग्रह गरेका छन् । जिल्ला अस्पतालमा उपचारका लागि आएका बिरामीमा अहिलेसम्म डेंगुको लक्षण नदेखिएको अस्पताल प्रमुख डा. अर्जुन बुढामगरले बताए ।
‘उपचारका लागि आउने बिरामीको रगत परीक्षण गर्दै आइरहेका छौं,’ उनले भने, ‘तर जुनसुकै बेला पनि रोगले महामारीको रुप लिन सक्ने भएकाले सतर्कता अपनाउन आग्रह गरिरहेका छौं ।’ दाङ, सुर्खेतलगायत छिमेकी जिल्लामा बिरामी बढेसँगै सल्यान पनि उच्च जोखिममा परेको उनको भनाइ छ । बाहिरबाट आउने संक्रमितका कारण रोगको जोखिम बढी रहेको उनी बताउँछन् ।
घर वरपर खाल्डाखुल्डीमा पानी जम्न नदिन र घर वरपर सफा राख्न स्थानीयलाई आग्रह गरिएको जिल्ला अस्पतालले जनाएको छ । डा. बुढामगरका अनुसार ‘एडिज एजिप्टाइ’ नामक लामखुट्टेको टोकाइबाट सर्ने डेंगुको संक्रमण हुन्छ ।
एक्कासी ज्वरो आउने, टाउको र आँखाका गेडी दुख्ने, शरिरमा बिबिरा आउने, रक्तश्राव हुनेलगायत लक्षण देखिने गरेको उनले जानकारी दिए । ‘जिल्लामा अहिले भाइरल ज्वरोको प्रकोप बढिरहेको छ,’ उनले भने, ‘ज्वरोका बिरामीमा डेंगुको संक्रमण हुनसक्ने भएकाले सतकर्ता अपनाउन आग्रह गरिरहेका छौं, स्वास्थ्यकर्मी पनि हाइ अलर्टमा छौं ।’
जिल्ला अस्पतालमा दैनिक १ सय ५० बढी बिरामी उपचारका लागि आउने गरेका छन् । त्यसमध्ये २० भन्दा बढी ज्वरोका बिरामी आउने गरेको उनको भनाइ छ ।
प्रकाशित : भाद्र ३१, २०७६ ०९:३५